Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.3.4 Famaranana
Open antso aoka ny manam-pahaizana maro sy ny tsy manam-pahaizana manolotra vahaolana amin'ny zava-manahirana izay vahaolana dia mora kokoa ny hijery noho ny hiteraka.
Ankehitriny dia afaka ihany koa ny manasongadina roa manan-danja ny fahasamihafana eo amin'ny antso misokatra tetikasa sy ny olombelona tetikasa computation. Voalohany, amin'ny tetikasa antso misokatra ny mpikaroka mamaritra tanjona (ohatra, mialoha sarimihetsika ratings) kanefa amin'ny olombelona computation ny fikarohana mamaritra ny micro-asa (ohatra, ny vahindanitra classifying). Faharoa, in misokatra ny antso ny mpikaroka naniry ny tsara indrindra anjara-tsara indrindra algorithm ho an'ny mialoha sarimihetsika naoty, ny ambany indrindra-angovo fanahafana ny proteinina, na ny tena manan-danja tapa-mialoha zavakanto-tsy karazana tsotra mitambatra ny rehetra ny fandraisana anjara.
Noho ny ankapobeny môdely ho an'ny antso misokatra sy ireo ohatra telo, inona no karazan-olana eo amin'ny fiaraha-monina fikarohana mety ho mety ny fomba ity? Tamin'izay fotoana izay, dia tokony hiaiky fa tsy nisy nahomby maro ohatra mbola (noho ny antony izay aho hanazava amin'ny indray mipi-maso). Mivantana eo amin'ny analogies, misy afaka sary an-tsaina fa ny ataon'ny mpiara-to-patanty tetikasa ho fomba ampiasain'ny mpikaroka ara-tantara nitady ny antontan-taratasy voalohany indrindra mba hilaza ny olona manokana na hevitra. Ny antso misokatra fomba io karazana olana mety ho sarobidy indrindra raha ny antontan-taratasy manan-danja dia tsy nangonina ao amin'ny iray Archive nefa miely.
More ankapobeny, fitondram-panjakana maro manana olana izay mety ho tompon'andraikitra manoloana ny hanokatra antso, satria izy ireo mikasika ny famoronana filazana mialoha izay azo ampiasaina mba hitarihana ny asa (Kleinberg et al. 2015) . Ohatra, toy Netflix te-mialoha naoty amin'ny sarimihetsika, governemanta dia mety te mialoha vokatra toy izay trano fisakafoanana tena mety mba hanana fahasalamana fanitsakitsahana ny fehezan-dalàna mba hahatanteraka fandinihana loharanon-karena mahomby kokoa. Nahatonga ity karazana olana, Glaeser et al. (2016) nampiasa misokatra antso mba hanampy ny City ny Boston mialoha toeram-pisakafoanana ny fahadiovana sy ny fanadiovana fandikan-dalàna mifototra amin'ny angona avy Yelp hevitra sy ara-tantara fisafoana angona. Glaeser sy ny mpiara-miasa aminy fa ny vinavina Tombanan'ny modely izay nahazo ny antso misokatra ho hanatsara ny mamokatra ny trano fisakafoanana mpanara-maso amin'ny tokony ho 50%. Raharaham-barotra koa ny olana amin'ny rafitra mitovy toy ny mpanjifa mialoha churn (Provost and Fawcett 2013) .
Farany, ankoatra ny hanokatra antso izay mahakasika ny vokatra izay efa nitranga in manokana angon-drakitra napetraka (ohatra, mialoha ny fahasalamana fehezan-dalàna fanitsakitsahana ny mampiasa tahirin-kevitra amin'ny lasa fahasalamana fehezan-dalàna fanitsakitsahana), misy afaka sary an-tsaina mialoha ny vokatra izay tsy nitranga mbola ho an'izay ao an-dataset . Ohatra, ny marefo Fianakaviana sy ny fiadana-miaina Child fantarina ny fianarana no tokony ho 5000 ny ankizy satria teraka tamin'ny 20 US tanàna samihafa (Reichman et al. 2001) . Mpikaroka no nanangona angon-drakitra momba ireo ankizy, ny fianakaviany, ary malalaka kokoa ny tontolo iainana ireo raha vao teraka, ary amin'ny taona 1, 3, 5, 9, ary ny 15. jerena ny fanazavana rehetra momba ireo ankizy, ahoana no mety mpikaroka tsara mialoha vokatra toy ny hoe iza no nahazo mari-pahaizana tany amin'ny oniversite? Na, dia naneho tamin'ny fomba izay mety ho maro kokoa mahaliana ny mpikaroka, izay tahirin-kevitra sy ny teoria ho milaza mialoha indrindra vokatra ireo? Koa satria tsy misy ireo ankizy ireo amin'izao fotoana izao ampy taona ho any ny oniversite, izany dia ho marina hatrany tarehy faminaniana sy ny maro ireo paik'ady isan-karazany izay mety afaka hampiasa mpikaroka. Ny mpikaroka izay mino fa manodidina ny famolavolana-dehibe eo amin'ny fiainana dia mety hitondra vokatra fomba iray raha ny mpikaroka izay mifantoka amin'ny fianakaviana manao zavatra hafa tanteraka. Iza amin'ireo no fomba fijery mety hiasa tsara kokoa? Tsy fantatsika, ary ao ny dingana hahita avy mba hianatra zavatra manan-danja momba ny fianakaviana, manodidina, ny fampianarana, ary ny ara-tsosialy ny tsy fitoviana. Ankoatra izany, dia mety ho filazana mialoha ireo ampiasaina mba hitarihana hoavy fanangonana antontan'isa. Eritrereto hoe nisy vitsivitsy ny oniversite diplaoma izay tsy nilaza mialoha ny diplaoma misy ny modely; ireo olona ireo tsara ho kandidà ho an'ny fanaraha-maso hatsaran'ny tafa sy dinika sy ny ethnographic fandinihana. Araka izany, amin'izao karazana antso misokatra, ny faminaniana dia tsy ny farany; fa, dia manome fomba vaovao ny mampitaha, hampanan-karena, ary mitambatra samy hafa fomba amam-panao teorika. Io karazana antso misokatra dia tsy manokana ny fampiasana angona avy marefo fianakaviana mba mialoha iza no handeha any amin'ny oniversite; dia azo ampiasaina mba mialoha izay vokatra izay farany ho nangonina tany amin'ny tahirin-kevitra ara-tsosialy longitudinal napetraka.
Rehefa nanoratra teo aloha ao amin'ity fizarana ity, dia tsy nisy ohatra maro ny mpikaroka ara-tsosialy amin'ny alalan'ny antso misokatra. Mino aho fa izany dia satria misokatra tsara antso tsy mifanaraka amin'ny fomba ara-tsosialy matetika ny mpahay siansa avelan'ny ny fanontaniana. Niverina ho amin'ny Netflix Loka, ara-tsosialy matetika ny mpahay siansa dia tsy hanontany momba ny mialoha tiany, izy ireo manontany mikasika ny fomba sy ny antony ara-kolontsaina ho an'ny olona tiany samy hafa avy amin'ny kilasy ara-tsosialy isan-karazany (Bourdieu 1987) . Toy izany "ahoana" sy ny "nahoana" fanontaniana tsy mitondra any mora ny hanamarinana vahaolana, ary noho izany dia toa zara raha mendrika hanokatra antso. Araka izany, dia hita fa misokatra kokoa antso tompon'andraikitra manoloana fanontaniana ny hoavy noho ny fanontaniana ny fanazavana; bebe kokoa momba ny fanavahana ny faminaniana sy ny fanazavana jereo Breiman (2001) . Recent theorists, na izany aza, dia niantso ny mpahay siansa ara-tsosialy mba handinika indray ny Fisampan-droa eo amin'ny fanazavana sy ny faminaniana (Watts 2014) . Toy ny tsipika eo amin'ny faminaniana sy ny fanazavana blurs, manantena aho fa fifaninanana misokatra ho mainka mahazatra ao amin'ny siansa ara-tsosialy.